समाचार - निलो प्रकाश दाँत सेतो: यो अधिक सुरक्षा छ?र यो अधिक प्रभावकारी छ?
निलो प्रकाश दाँत सेतो: यो अधिक सुरक्षा छ?र यो अधिक प्रभावकारी छ?
हामीले हाम्रा पाठकहरूका लागि उपयोगी हुने उत्पादनहरू समावेश गर्दछौं। तपाईंले यस पृष्ठमा लिङ्क मार्फत खरिद गर्नुभयो भने हामीले सानो कमीशन कमाउन सक्छौं। यो हाम्रो प्रक्रिया हो।
तपाईको मुस्कानलाई चम्किलो बनाउनको लागि तपाईले घरमा वा आफ्नो दन्त चिकित्सकको कार्यालयमा प्रयोग गर्न सक्नुहुने धेरै विभिन्न उत्पादनहरू र प्रविधिहरू छन्। तिनीहरूका प्रभावहरू (र मूल्यहरू) भिन्न हुन्छन्, तर कुनै पनि स्थायी परिणामहरू प्रदान गर्दैन।
एउटा प्रविधि भनेको हल्का सक्रिय दाँत सेतो बनाउने प्रक्रिया हो। यस उपचारका लागि विभिन्न प्रकारका बत्तीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसमा:
नीलो एलईडी प्रकाश उपचारहरू अधिक लोकप्रिय हुँदैछन्, विशेष गरी तिनीहरू UV प्रकाश भन्दा सुरक्षित मानिन्छन्। तपाईं ओभर-द-काउन्टर सेतो पार्ने उत्पादनहरू किन्न सक्नुहुन्छ जसमा नीलो प्रकाश हुन्छ, वा तपाईं दन्त चिकित्सकको कार्यालयमा उपचार गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको दन्त चिकित्सकले तपाईंको दाँतमा सेतो पार्ने जेल लगाउनेछन्।उनीहरूले हाइड्रोजन पेरोक्साइड वा कार्बामाइड पेरोक्साइड सेतो बनाउने जेल सक्रिय गर्न निलो एलईडी बत्ती प्रयोग गर्नेछन्।यसले जेललाई छिट्टै भत्काउन मद्दत गर्छ।परिणामी रासायनिक प्रतिक्रियाले दाँतबाट दाग हटाउँछ।
2014 को एक अध्ययनले दन्त कार्यालय सेटिङमा दाँत ब्लीचिङको लागि प्रकाश-सक्रिय स्रोतहरूमा एक दशकको अनुसन्धानको समीक्षा गर्यो। यसले निष्कर्ष निकाल्यो कि फोटोएक्टिभेटरको प्रयोगले सेतो बनाउने प्रक्रियालाई गति दिन वा नतिजा सुधार गर्न देखा परेन।
यद्यपि, 2012 को एक अध्ययनले देखाएको छ कि अफिस प्रक्रियाहरूमा सेतो बनाउने जेल र एलईडी बत्तीहरू प्रयोग गर्दा काम लाग्छ।
सामान्यतया, 2014 साहित्यले सुझाव दिन्छ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड वा कार्बामाइड पेरोक्साइड प्रयोग गरी दाँत सेतो बनाउने विधिहरू, नीलो प्रकाश सेतो गर्ने विधिहरू सहित, सुरक्षित छन्। यसमा क्लिनिकल अध्ययनहरू र इन भिट्रो अध्ययनहरू समावेश छन्, जुन मानव मुख बाहिरका दाँतहरूको अध्ययन हो।
नीलो प्रकाश उपचारको साथ आफ्नो दाँत सेतो गरेपछि, तपाईंले उपचार गरिएको क्षेत्रमा केही दाँत संवेदनशीलता र जलन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
2012 को सानो अध्ययनमा, अफिस उपचारमा LED बत्तीहरू प्रयोग गरेर सक्रिय गरिएको सेतो जेलको तीन 10-मिनेट चक्रहरू समावेश थिए।
अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि मानिसहरूले आफ्नो पहिलो कार्यालयमा उपचार पछि उनीहरूको दाँत वरिपरि अलिकति बढी जलन र संवेदनशीलता अनुभव गरे जुन एलईडी बत्ती बिना घरमा लगातार2हप्ता उपचारको तुलनामा।
यदि तपाइँ दन्त चिकित्सकको कार्यालयमा नीलो बत्ती दाँत सेतो प्रक्रिया छनोट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ निम्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ:
ब्लू लाइट टिथ व्हाइटनिङ किटले तपाईंलाई घरमै आफ्नो दाँत सेतो बनाउन अनुमति दिन्छ। ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा: घरमा किटहरूमा समाधानहरू समावेश हुन्छन् जुन तपाईंले दन्त चिकित्सकको कार्यालयमा प्राप्त गर्ने जत्तिकै बलियो हुँदैन।
तिनीहरू सेतो पार्ने एजेन्टहरू वा सेतो बनाउने जेलहरूले भरिएको प्लास्टिक ट्रेहरू, र ब्याट्री-संचालित नीलो प्रकाशको साथ सेतो पार्ने स्ट्रिप्सको साथ आउन सक्छन्।
तपाईंले प्रयोग गरिरहनुभएको किटमा सही निर्देशनहरू पालना गर्न निश्चित हुनुहोस् किनभने तिनीहरू उत्पादन अनुसार फरक हुन सक्छन्। केही उत्पादनहरूले तपाईंलाई एकभन्दा बढी उपचारको आवश्यकता पर्न सक्छ भनी विज्ञापन गर्छन्।
तपाईंले व्यावसायिक वेबसाइटहरू साथै अनलाइन हाइपरमार्केटहरू, फार्मेसीहरू र अन्य ठाउँहरूबाट नीलो प्रकाश दाँत सेतो बनाउने किटहरू किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले शाकाहारी, ग्लुटेन-मुक्त र कोषेर संस्करणहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्लू लाइट थेरापी मात्र उज्यालोमा आधारित दाँत सेतो पार्ने उपचार उपलब्ध छैन। आफ्नो दन्त चिकित्सकलाई उनीहरूले अफिसमा प्रस्ताव गर्न सक्ने अन्य उपचारहरूको बारेमा सोध्नुहोस्।
केही अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि हलोजन बत्तीहरू प्रयोग गर्दा दाँत सेतो बनाउने प्रक्रियाहरूको परिणामहरू सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, 2016 मा प्रकाशित एक अध्ययनले 37.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड समाधानको साथ हलोजन बत्तीहरू प्रयोग गर्दा हलोजन बत्तीहरू भन्दा राम्रो दाँत सेतो भएको पत्ता लाग्यो।
जे होस्, यो एक इन भिट्रो अध्ययन थियो, जसको मतलब यो मानव मुखमा नभएका दाँतहरूमा गरिएको थियो। त्यसैले, मानवमा प्रदर्शन गर्दा, नतिजा फरक हुन सक्छ। वर्तमानमा, यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले दन्त चिकित्सकलाई हेर्न आवश्यक पर्दछ। यो विधि प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाइँको दन्त चिकित्सकले तपाइँको दाँत सेतो गर्न मद्दत गर्न FDA-अनुमोदित UV प्रकाश वा लेजरहरू प्रयोग गर्ने प्रक्रियाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ। यद्यपि UV प्रकाशको जोखिमको सम्भावित जोखिमहरू कम देखिन्छन्, तिनीहरू अझै पनि सम्भव छन्। तपाइँको दन्त चिकित्सकसँग तपाइँको आँखा र गिजाको सुरक्षाको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। शल्यक्रिया।
दाँत सेतो बनाउने काम घरमा वा दन्तचिकित्सकको कार्यालयमा गर्न सकिन्छ। तपाईंको लागि उत्तम विकल्प सामान्यतया तपाईंको दागको प्रकार र संवेदनशीलतामा निर्भर गर्दछ।
लेजर दाँत सेतो गर्नाले तपाईंको दाँत उज्यालो र दाग कम गर्न सक्छ। यो घरेलु प्रक्रियाहरू भन्दा बढी प्रभावकारी छ।
पोस्ट समय: जुन-07-2022